Ndi agha oma-mmiri nke Nigeria enyefela ndi Russia 15 n'aka ndi uwe ojii
Ndị agha ogbu-na-mmiri nke ala Nigeria, Nigerian Navy, na bekee, enyefego mmadụ 15 ndị Russia n’aka ndị uwe ojii nke Nigeria.
N’abalị 19 nke ọnwa ọkụtoba afọ 2012, ndị agha ọma-mmiri nke Nigeria jidere mmadụ 15 ndị Russia ebe ha na-akwọ ụgbọ-mmiri Myre Seadiver na mpaghara mmiri oshumiri nke ala Nigeria.
Mgbe ha nyochara ụgbọ-mmiri ahụ ọfụma, ndị agha Nigeria chọpụtara na nanị egbe na ngwa ọgụ juputere ụgbọ-mmiri ahụ.
A gụtara ya ọtụtụ egbe agha AK47 yana mkpụrụ mgbọ 3,643, ọtụtụ egbe agha MR1 na mkpụrụ mgbọ 4,955.
Otu n’ime ndị isi ndị agha ọma-mmiri nke Nigeria, Commodore Martins Njoku, kwuru na ha na-enyefe ndị Russia ahụ n’aka ndị uwe ojii n’usoro iwu ala Nigeria:
“We have been doing preliminary investigation as to why they were on our water… according to the constitution, the Navy is handing them over to the Nigerian Police to continue the investigation.”
Commodore Njoku nyefere akwụkwọ njem (passport) ndị ahụ, yana igodi e ji agbaghe ụgbọ-mmiri ahụ n’aka onye osote onye isi ngalaba ndị uwe ojii na-ahụ maka igwu ojoro (Police Special Fraud Unit), bụ Zubairu Muazu.
Mazi Muazu kwuru na ndị uwe ojii ga-anwa oko ha ịchọpụta ịhe ụgbọ-mmiri ahụ bu nani ngwa agha bịara ime na Nigeria.